ဂေး အဖြစ် နေထိုင်ခြင်း ကို အမှားတစ်ခုလို့ မထင်ဘူး လုံးဝနောင်တမရဘူး ဆို တဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် – Shwewiki.com
ရုပ် ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် ဥက္ကာမင်းမောင်ဟာ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် အမိုက်စားနဲ့ အားပေးဝန်းရံနေသူတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ LGBT တစ်ယောက်အဖြစ် ပွင့်လင်းစွာနေထိုင်ခဲ့ပြီး သူချစ်တဲ့ ချစ်သူက သူ့အတွက် ခွန်အားတွေ ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကာ အချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
သူေ ရးသားခဲ့တာကတော့ ” အချစ်ဆိုသော အရာမှာ ဘာကန့်သတ်ချက်မှ မရှိပါဘူး.. ယောင်္ကျားချင်းဖြစ်ဖြစ် မိန်းမချင်းဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တယ် တန်ဖိုးထားတယ်
သေတဖန်သက်တဆုံး ဆိုးတူကောင်းဖက် ဘဝလက်တွဲဖော်အနေနဲ့ ထာဝရတူတူနေသွားတယ်ဆိုတာ ကံကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပါ.. အဲ့လို ဘဝနောက်ဆုံးချိန်ထိတူတူ နေခွင့်ရတဲ့သူတွေ လောကကြီးမှာရှားပါတယ်..”
” ကံတရားကြောင့် ဘဝပေးအခြေအနေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် တွဲလာတာ အချိန်တွေကြာလာတော့ ချစ်ခြင်းတွေပြောင်းလဲသွားတာကြောင့် ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဖက်က နှိပ်စက်တာကြောင့် ဖောက်ပြန်တာကြောင့်
အကြောင်းကြောင်းပေါင်းများစွာနဲ့ ယောင်္ကျားနဲ့ မိန်းမ စုံတွဲတွေမှာရော ကျွန်တော်တို့လို LGBTQ စုံတွဲတွေမှာရောတွေ့နေမြင်နေကြားနေရတယ်.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘဝရဲ့ အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ အချိန်တွေကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီ.. ကျွန်တော် ဆုတောင်းပါတယ်..”
“ကျွန်တော် ကောင်းအောင်ပဲနေမယ်.. သစ္စာရှိစွာပဲရှေ့ဆက်မယ်.. ကျွန်တော့်ဘဝကို ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ဆံဖြူသွားကျိုး ဒုတ်ကောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်ရချိန်ထိ ကျွန်တော်သူနဲ့ တူတူရှိချင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်တို့ဘဝမပြည့်စုံသေးပါဘူး.. ချမ်းလဲ မချမ်းသာဘူး.. ဒါပေမယ့် သူကျွန်တော့်ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်.. ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်အေးအေးချမ်းချမ်းပဲဘဝကိုဖြတ်သန်းနေတယ်.. ခရီးတူတူထွက်တယ်..သူ့ကြောင့် ကျွန်တော်ကြိုးစားချင်စိတ်တြွေဖစ်တယ်.. ကျွန်တော့် မိဘ အတွက်အပြင် သူ့အတွက်လဲ ကျွန်တော်အောင်မြင်ချင်တယ်..”
” အလှူရေစက်လက်နဲ့မကွာလှူနိုင်တဲ့ အခြေအနေအထိ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ဘဝတိုက်ပွဲဝင်နေဆဲပါ..ကျွန်တော့်ဘဝဖြစ်တည်မှူ Gay တစ်ယောက်အဖြစ်နေထိုင်ခြင်းကို အမှားတခုလို့ မတွေးမိတော့ဘူး..ဘယ်တော့မှ နောင်တလဲမရဘူး..ဖြစ်ရာဘဝမှာကောင်းအောင်ပဲနေတယ်.. ကျွန်တော်တို့လို LGBTQ များအားလုံးကိုလဲ အကြံပြုအားပေးချင်တာက ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှ လက်မလျော့ပါနဲ့..”
“ဘယ်သူ့ကြောင့်မှ ကိုယ့်ဘဝဖြစ်တည်မှူအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ပြီး မပျော်တဲ့ဘဝမှာ မရှင်သန်ပါနဲ့.. ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက် ဘဝကိုဆက်လက်ရှင်သန်ပါ..ကိုယ့်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေ မုန်းတဲ့သူတွေကို ဥပေက္ခာပြုပါ..
လူသားတိုင်း ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ထာဝရပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေသွားနိုင်ပါစေ.. Happy Myanmar Pride ပါ.. နောက်နှစ်တော့ အားလုံးနဲ့တူတူဆင်နွှဲဖို့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်” လို့ဆိုကာ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။
ဥက္ကာမင်းမောင်ဟာ လက်ရှိမှာတော့ New York မှာရောက်ရှိနေပြီး သူချစ်တဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေသူလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥက္ကာမင်းမောင်ကို ချစ်တဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သူ့အကြောင်းအရာတစ်ချို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ရုပျ ရှငျနဲ့ ဗီဒီယိုသရုပျဆောငျ ဥက်ကာမငျးမောငျဟာ ကိုယျလုံး ကိုယျပေါကျ အမိုကျစားနဲ့ အားပေးဝနျးရံနသေူတှနေဲ့ ပွညျ့နကျနတေဲ့ သူတဈယောကျပါ။ သူဟာ LGBT တဈယောကျအဖွဈ ပှငျ့လငျးစှာနထေိုငျခဲ့ပွီး သူခဈြတဲ့ ခဈြသူက သူ့အတှကျ ခှနျအားတှေ ပေးခဲ့တယျလို့ဆိုကာ အခဈြနဲ့ပတျသကျတဲ့ အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုခကျြကို ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
သူေ ရးသားခဲ့တာကတော့ ” အခဈြဆိုသော အရာမှာ ဘာကနျ့သတျခကျြမှ မရှိပါဘူး.. ယောကငြ်ျားခငျြးဖွဈဖွဈ မိနျးမခငျြးဖွဈဖွဈ လူတဈယောကျက လူတဈယောကျကို ခဈြတယျ တနျဖိုးထားတယျ
သတေဖနျသကျတဆုံး ဆိုးတူကောငျးဖကျ ဘဝလကျတှဲဖျောအနနေဲ့ ထာဝရတူတူနသှေားတယျဆိုတာ ကံကောငျးခွငျးမင်ျဂလာပါ.. အဲ့လို ဘဝနောကျဆုံးခြိနျထိတူတူ နခှေငျ့ရတဲ့သူတှေ လောကကွီးမှာရှားပါတယျ..”
” ကံတရားကွောငျ့ ဘဝပေးအခွအေနကွေောငျ့ ပတျဝနျးကငျြကွောငျ့ တှဲလာတာ အခြိနျတှကွောလာတော့ ခဈြခွငျးတှပွေောငျးလဲသှားတာကွောငျ့ ကိုယျ့ အိမျထောငျဖကျက နှိပျစကျတာကွောငျ့ ဖောကျပွနျတာကွောငျ့
အကွောငျးကွောငျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ ယောကငြ်ျားနဲ့ မိနျးမ စုံတှဲတှမှောရော ကြှနျတျောတို့လို LGBTQ စုံတှဲတှမှောရောတှနေ့မွေငျနကွေားနရေတယျ.. ကြှနျတျောကိုယျတိုငျဘဝရဲ့ အဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ အခြိနျတှကြေျောဖွတျခဲ့ပွီးပွီ.. ကြှနျတျော ဆုတောငျးပါတယျ..”
“ကြှနျတျော ကောငျးအောငျပဲနမေယျ.. သစ်စာရှိစှာပဲရှဆေ့ကျမယျ.. ကြှနျတေျာ့ဘဝကို ကိုယျခဈြတဲ့သူနဲ့ ဆံဖွူသှားကြိုး ဒုတျကောကျနဲ့ လမျးလြှောကျရခြိနျထိ ကြှနျတျောသူနဲ့ တူတူရှိခငျြပါတယျ.. ကြှနျတျောတို့ဘဝမပွညျ့စုံသေးပါဘူး.. ခမျြးလဲ မခမျြးသာဘူး.. ဒါပမေယျ့ သူကြှနျတေျာ့ကို စိတျခမျြးသာအောငျထားတယျ.. ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျအေးအေးခမျြးခမျြးပဲဘဝကိုဖွတျသနျးနတေယျ.. ခရီးတူတူထှကျတယျ..သူ့ကွောငျ့ ကြှနျတျောကွိုးစားခငျြစိတျတွှဖေဈတယျ.. ကြှနျတေျာ့ မိဘ အတှကျအပွငျ သူ့အတှကျလဲ ကြှနျတျောအောငျမွငျခငျြတယျ..”
” အလှူရစေကျလကျနဲ့မကှာလှူနိုငျတဲ့ အခွအေနအေထိ ကြှနျတျောတို့ နှဈယောကျဘဝတိုကျပှဲဝငျနဆေဲပါ..ကြှနျတေျာ့ဘဝဖွဈတညျမှူ Gay တဈယောကျအဖွဈနထေိုငျခွငျးကို အမှားတခုလို့ မတှေးမိတော့ဘူး..ဘယျတော့မှ နောငျတလဲမရဘူး..ဖွဈရာဘဝမှာကောငျးအောငျပဲနတေယျ.. ကြှနျတျောတို့လို LGBTQ မြားအားလုံးကိုလဲ အကွံပွုအားပေးခငျြတာက ဘယျလို အကွောငျးကွောငျ့နဲ့မှ လကျမလြော့ပါနဲ့..”
“ဘယျသူ့ကွောငျ့မှ ကိုယျ့ဘဝဖွဈတညျမှူအမှနျတရားကိုဖုံးကှယျပွီး မပြျောတဲ့ဘဝမှာ မရှငျသနျပါနဲ့.. ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့သူတှအေတှကျ ဘဝကိုဆကျလကျရှငျသနျပါ..ကိုယျ့ကိုဆနျ့ကငျြတဲ့သူတှေ မုနျးတဲ့သူတှကေို ဥပက်ေခာပွုပါ..
လူသားတိုငျး ကိုယျခဈြတဲ့သူနဲ့ ထာဝရပြျောပြျောရှငျရှငျနသှေားနိုငျပါစေ.. Happy Myanmar Pride ပါ.. နောကျနှဈတော့ အားလုံးနဲ့တူတူဆငျနှဲဖို့ ကြှနျတျောတို့နှဈယောကျ လာနိုငျအောငျကွိုးစားပါမယျ” လို့ဆိုကာ ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။
ဥက်ကာမငျးမောငျဟာ လကျရှိမှာတော့ New York မှာရောကျရှိနပွေီး သူခဈြတဲ့မိသားစုနဲ့အတူ ဘဝကိုပြျောရှငျစှာဖွတျသနျးနသေူလဲဖွဈပါတယျ။ ဥက်ကာမငျးမောငျကို ခဈြတဲ့ ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ သူ့အကွောငျးအရာတဈခြို့ကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။